Ndakawana Mubayiro Mukuru Kupfuura Yese—Nyanzvi Yemutambo weTennis
SARUDZA MUTAURO Abua Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Edo Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Maya Mingrelian Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ndakawana Mubayiro Mukuru Kupfuura Yese
Yakataurwa naVeli Paloheimo
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndakawana Mubayiro Mukuru Kupfuura Yese
GORE REKUBEREKWA 1967
NHOROONDO YEUPENYU NDAITAMBA TENNIS
Ndakakurira nechekunze kweguta reTampere, kuFinland. Mhuri yedu yaisanyanyoita zvekunamata asi vaikoshesa dzidzo uye tsika dzakanaka. Amai vangu vanobva kuGermany, saka pandaiva mudiki, ndaimboenda kuWest Germany uko kwaigara vanasekuru nambuya vangu.
Zvemitambo ndakazvifarira kubvira ndichiri mudiki. Ndaitamba mitambo yakasiyana-siyana, asi pandakanga ndava nemakore 14 ndakazosarudza kuita zvetennis chete. Pandakazosvitsa makore 16, ndakanga ndava kudzidzira tennis kaviri kana kuti katatu pazuva. Kaviri kacho ndaiva neaindidzidzisa uye kana ava manheru ndaizodzidzira ndega. Ndainakidzwa nekamutambirwo kanoitwa tennis. Yakandibatsira kuekisesaiza uye kushandisa pfungwa. Kunyange zvazvo ndainakidzwa nekutamba neshamwari dzangu uye ndichimbonwira-nwirawo pano neapo, handina kumbobvira ndasungirwa nyaya dzekushandisa madhiragi kana kuti zvinodhaka. Nguva yangu yaiperera pakuita zvetennis.
Ndakatanga kukwikwidza mumitambo yesangano rinonzi ATP pandakanga ndiine makore 17. * Pashure pekuhwina mitambo yakati kuti, ndakatanga kuita mukurumbira munyika yedu. Pandakanga ndava nemakore 22, ndakanga ndatovawo pakati peshasha 50 dzevatambi vetennis pasi rese.
Ndakaita makore ndichienda kunyika dzakawanda ndichitamba tennis. Ndakaona nzvimbo dzakawanda dzakanaka, asi ndakatangawo kuona matambudziko ari kusangana nevanhu akadai sekuparwa kwemhosva, kushandiswa kwemadhiragi, uye kusvibiswa kwenyika. Semuenzaniso, pandaiva muUnited States, pane dzimwe nzvimbo dzatairambidzwa kuenda nemhaka yeutsotsi huriko. Zvese izvi zvaiita kuti ndinetseke. Kunyange zvazvo ndainakidzwa nekutamba tennis, ndakanga ndisiri kunyatsofara.
Musikana wangu, Sanna, akanga ava kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha. Ndakaita kakushamiswa kuti aida kunamata, asi handina kumurambidza kudzidza. Takachata muna 1990, uye akazobhabhatidzwa semumwe weZvapupu zvaJehovha gore rakatevera. Zvechechi ndakanga ndisingazvifariri hangu asi ndaitenda kuti Mwari ariko. Ndaiyeuka kuti mbuya vangu vekuGermany vaigara vachiverenga Bhaibheri, uye vakambondidzidzisa kunyengetera.
Mumwe musi ini nemudzimai wangu taitandara hedu nemumwe murume nemudzimai vaiva Zvapupu. Murume wacho ainzi Kari, uye akandiratidza uprofita hweBhaibheri hunotaura ‘nezvemazuva ekupedzisira.’ (2 Timoti 3:1-5) Ndakafarira zvandakanzwa nekuti zvakaita kuti ndinzwisise nei munyika makazara nematambudziko. Musi iwoyo hatina zvakawanda zvatakataura. Asi kubvira ipapo, Kari akatanga kukurukura neni nezveBhaibheri uye zvinhu zvese zvandaidzidza zvaiva nemusoro. Zvakanga zvakaoma kuti tigare tichikurukura nekuti ndaigara ndakabatikana uye kakawanda kacho ndainge ndisipo, asi Kari haana kukanda mapfumo pasi. Ainyora tsamba achipindura mibvunzo yandaiva nayo patainge tadzidza. Bhaibheri rakanyatsopindura zvakajeka mibvunzo yandaiva nayo uye zvishoma nezvishoma ndakatanga kuona kuti rinotaura nezveUmambo hwaMwari uhwo huchaita kuti chinangwa chake chizadzike. Kuziva kuti Mwari anonzi Jehovha uye zvaakatiitira, kwakandibata. (Pisarema 83:18) Chakanyanya kundibata, kutipa kwaakaita Mwanakomana wake kuti atifire. Haana kungozviitira mutemo asi akazviita nekuti anotida. (Johani 3:16) Ndakadzidzawo kuti ndaikwanisa kuva shamwari yaMwari ndorarama nekusingaperi muparadhiso. (Jakobho 4:8) Ndakatanga kuzvibvunza kuti: “Ndingaratidza sei kuti ndinotenda zvandakaitirwa naMwari?”
Ndakafunga nezvemararamiro andaiita. Ndainge ndiri kudzidza kuti mufaro wechokwadi unobva pakupa, uye ndainzwa ndichida kuudzawo vamwe zvandaidzidza. (Mabasa 20:35) Mutambo wetennis waiita kuti ndiite mazuva anenge 200 pagore ndisiri pamba ndiri kumakwikwi. Upenyu hwemhuri yedu hwaingova pamutambo wangu wetennis. Ndakaona kuti ndaifanira kuchinja.
Ndaizviziva kuti kana ndikasiya zvetennis ndichiita zvekunamata vanhu vakawanda vaizotadza kuzvinzwisisa. Asi hazvina kumbondiomera nekuti mukana wekunyatsoziva Jehovha uye wekuwana upenyu husingaperi waikosha kupfuura chero mubayiro upi zvawo wandaigona kuzowana nekutamba tennis.
Ndakanga ndatsunga kuti chero zvichataurwa nevanhu handina basa nazvo, ndini ndazvisarudzira. Vhesi yeBhaibheri yakanyanya kundipa ushingi ndiPisarema 118:6 inoti: “Jehovha ari kurutivi rwangu; handizotyi. Munhu wepanyika angandiitei?”
Pandakasarudza kusiya tennis, ndakabva ndapiwa mukana wekuti ndinogona kutamba kwemakore ndisingatyiri kumbomiswa. Asi ndakanga ndatosarudza kusiya, saka ndakaramba uye ndakazorega kutamba mumitambo yeATP. Ndakaramba ndichidzidza Bhaibheri, uye ndakazobhabhatidzwa semumwe weZvapupu zvaJehovha musi wa2 July 1994.
Kana ndiri ini, hakusi kuti ndakasangana nedambudziko rakaita kuti ndizofunga nezvaMwari uye handingati ndaitsvaga chokwadi. Ndaiona sekuti upenyu hwangu hwakanga hwakatonaka zvekuti hapana chimwe chandaida. Asi ndisingambozvifungiri, ndakaona kuti pane zvimwe zvinokosha muupenyu uye ndava kunakidzwa neupenyu zvandakanga ndisingambofungidziri! Iye zvino, tava nemhuri yakasimba uye yakabatana. Uye ndinofara kuti vanakomana vangu vatatu vari kunditevedzerawo pakunamata Mwari kwete kuita zvemitambo.
Ndichiri kufarira kutamba tennis. Ndichiri kuita zvinhu zvakadai sekudzidzisa vamwe mutambo uyu ndiri maneja weimwe nzvimbo inoitirwa mutambo uyu kuti ndiwane chekurarama nacho. Asi handichakoshesi zvemitambo. Kare, ndaipedza nguva yakawanda ndichidzidzira kuva nyanzvi yetennis. Asi iye zvino ndiri kunakidzwa nekushandisa nguva yangu kubatsira vamwe kuti vazive uye vashandise zvinotaurwa neBhaibheri. Kuisa ushamwari hwangu naJehovha pekutanga uye kuudzawo vamwe tariro yandinayo yeramangwana kuri kuita kuti ndifare chaizvo.—1 Timoti 6:19.
^ ndima 3 ATP (Association of Tennis Professionals), isangano rinoona nezvemitambo yetennis yenyanzvi dzechirume. Sangano iri rinoronga makwikwi enyanzvi uye vanenge vakunda vamwe vanopiwa mibayiro yemari. Kuhwina kunoita munhu pamakwikwi aya ndiko anozoita kuti arambe achikwirira kuenda pakati peshasha.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndakawana Mubayiro Mukuru Kupfuura Yese
ijwcl chits. 5
Ndaiona Sekuti Ndaiva Nezvese Zvandaida